सातामा ३.५५ अंक घट्यो शेयर बजार, लगानीकर्ताले ५९ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति गुमाए
साउन १७, काठमाडौं । यस साताको पाँच दिन कारोबारमा नेपालको शेयर बजार ३ दशमलव ५ अंक घटेको छ । पहिलो कारोबार दिन आइतवार २२ दशमलव ४९ अंक र अन्तिम कारोबार दिन ७ दशमलव ५३ अंक बढेको बजार बाँकी तीन कारोबार दिन भने घटेको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन साउन ८ गते बिहीवार १ हजार ४४२ दशमलव ६१ विन्दुमा रहेको शेयर बजार साउन १५ गते बिहीवारसम्म आईपुग्दा १ हजार ४३९ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा झरेको हो । गत साता शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक पारेको थियो ।
यो साता भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको निर्देशनमा लगानीकर्ता अलमलिएको बजार विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसै सातादेखि राष्ट्र बैंकले बढाएको धितोकर्जाको सीमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यो साता लगानीकर्ताहरुले रू. ५९ अर्ब ९ करोड ३० हजार बराबरको सम्पत्ति गुमाएका छन् । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन रू. १८ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रहेको कुल बजार पूँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन घटेर रू. १८ खर्ब ९४ अर्ब ५२ करोड १० लाख कायम भएको छ ।
कुल कारोबार रकम भने गत साताको तुलनामा यस साता रू. ४२ करोड ५६ लाख ७३ हजार बढी भएको छ । गत साता पाँच कारोबार दिनमा रू. ७ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख ६७ हजार कुल कारोबार भएकोमा यस साता सोहि अवधिमा रू. ८ अर्ब २ करोड २३ लाख ४० हजार बराबरको कारोबार भएको हो ।
यस अवधिसम्म ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्ड पनि २ दशमलव ९५ अंक घटेको छ । गत साता ३०३ दशमलव ९० विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस साता ३०० दशमलव ९५ विन्दुमा झरेको हो ।
सातामा भएको कारोबारको महत्वपूर्ण सूचकहरु :
यस साता सर्वाधिक कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीमध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेको छ ।
यस कम्पनीको सातामा रू. ८३ करोड ८० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै सातामा सर्वाधिक कारोबार गर्ने दोस्रोमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ ।
यस कम्पनीको सातामा रू. ७२ करोड ९० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो ।
यस साता पनि सर्वाधिक बजार पूँजीकरण हुने कम्पनीका पहिलो स्थान नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीलेनै लिएको छ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको शेयरको कुल मूल्य अर्थात् कुल बजार पूँजीकरण रकम रू. ९८ अर्ब १० करोड रहेको छ ।
कुल बजार पूँजीकरणको सबैभन्दा बढी हिस्सा यस कम्पनीले ओगटेको हो । शेयर बजारमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ । साताको अन्तिम दिन उक्त कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ६५४ कायम भएको छ ।
१३ अंकले घटेको नेप्से १३९०.१३ विन्दुमा (१२ :३० बजेको अपडेट) [२०७७ सावन, २१]